ဒူဒူကြီး: February 2013
straight, flat နဲ့ square အစရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အနေအထားတွေကို တိကျစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်မှသာ မှန်ကန်တဲ့ shaft alignment အဖြစ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြောင့်တန်းမှု 'straightness' ချိန်ညှိရန်၊ tight wire တွေကို ကိုးကားစရာ reference line အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ tight wire တွေရဲ့ အလေးချိန် weight ကြောင့်၊ sag ဆိုတဲ့ 'အိကျ' မှုတွေ ပေါါပေါက်လာနိုင်ပြီး၊ ရှည်လျှားဝေးကွာတဲ့ over long distances ကို၊ တိုင်းတာရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိသလို၊ တုန်ခါမှု vibrations တွေကြောင့်လည်း၊ တိကျမှု accuracy မရရှိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
ညီညာမှု 'flatness' ချိန်ညှိရန် straightedge သို့မဟုတ် ပေတံ ruler တို့ကို၊ ကိုးကားစရာ reference line အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ ပြင်ညီ over large horizontal areas တွေရဲ့ ညီညာမှုကို ချိန်ညှိရာမှာ straightedge သို့မဟုတ် ပေတံ ruler ကို၊ အပိုင်းလိုက် from part to part ပြောင်းလဲနေရာ ချကာ၊ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ degree of flatness ပမာဏကို တိုင်းတာရာမှာ၊ ဧရိယာတခုလုံး အတွက် ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပဲ၊ သီးခြား individual surface မျက်နှာပြင်အဖြစ်သာ၊ ဖော်ပြနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြင်ညီ plane တခုနဲ့ အခြားပြင်ညီ plane တခုတို့ 90° angle အနေအထားဖြင့် intersecting အနေနဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် ကျရောက်နေခြင်းကို၊ ထောင့်မှန်ကျခြင်း 'squareness' လို့ခေါါပါတယ်။ 90° angle ထောင့်မှန် ကျအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ steel square တွေအပြင်၊ ဒေါင်လိုက် single vertical reference line အဖြစ်၊ plumb bob လို့ခေါါတဲ့ 'ချိန်သီး' တွေကို အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ plane တွေရဲ့ 'squareness' ကို ချိန်ညှိရာမှာ၊ အပိုင်းလိုက် from part to part ပြောင်းလဲနေရာ ချကာ၊ ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်၊ တိုင်းတာရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိသလို၊ တိကျမှု accuracy ကို မရရှိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ shaft alignment ကို ထိရောက်စွာချိန်ညှိစေနိုင်ဖို့ optical metrology နည်းပညာကို၊ အစားထိုးအသုံးပြုလာကြပြီး၊ "laser alignment" နည်းလမ်းလို့ ခေါါဆိုကြပါတယ်။
'optical metrology' နည်းပညာဟာ precise lines လို့ခေါါတဲ့ တိကျတဲ့ အလင်းတန်းတွေအသုံးပြုပြီး၊ အလင်းတန်းထုတ်လွှင့်ရာ နေရာမှ၊ ဟင်းလင်းပြင် space တနေရာရှိ၊ မျက်နှာပြင် plane သို့ 'အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း' ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ precise lines ရရှိစေရန် အလင်းတန်း ထုတ်လွှတ်ပေးမယ့် optical tooling အဖြစ်၊ laser instrumentation ကရိယာတွေကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။ position sensing targets တနည်းအားဖြင့် sensing position ကို သိရှိရန်၊ precise lines တွေ လိုအပ်သလို၊ precise reference lines နဲ့ reference planes တွေရှိမှသာ၊ တိကျတဲ့ accurate measurements တိုင်းတာမှုကို၊ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ precise reference lines ဟာ precise lines တနည်းအားဖြင့် 'LOS' လို့ခေါါတဲ့ ဖြောင့်တန်းတဲ့အလင်းတန်း 'line of sight' ဖြစ်ရန် လိုအပ်သလို၊ အလင်းတန်းကို လက်ခံရယူမယ့် reference planes ဟာလည်း၊ ထိရောက်စွာတုန့်ပြန်မှုပေးနိုင်တဲ့ 'position sensitive targets' ဖြစ်ရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
ဟိုးအရင်ကတော့ 'optical micrometer' လို့ခေါါတဲ့ scale တွေထောင်ထားတဲ့ ကားချပ်ပေါါမှာ၊ 'LOS' လို့ခေါါတဲ့ ဖြောင့်တန်းတဲ့ အလင်းတန်း 'line of sight' ကို လူမှတဆင့် interpreting အနေနဲ့ ကျရောက်စေပြီး၊ alignment telescope မှဖတ်ယူကာ၊ 'alignment' ချိန်ညှိခဲ့ကြပါတယ်။ emitter မှ ထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ emitted light တနည်းအားဖြင့် precise lines ဟာ sensing object ဆိုတဲ့ reference plane နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ၊ interrupted သို့မဟုတ် reflected ဖြစ်ပေါါပြီး၊ light beam မှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါါပါတယ်။ light changes ဆိုတဲ့၊ light beam ရဲ့ အပြောင်းအလဲကို receiver မှ လက်ခံရယူပြီး၊ electrical output အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ၊ lines နဲ့ planes တွေအတွက် laser ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုသလို၊ digital နည်းပညာကြောင့် interpreting တွေမလိုအပ်တော့ပဲ၊ shaft alignment ကို ချိန်ညှိ လာကြပါတယ်။ 'laser ရောင်ခြည်' ဆိုတာကတော့ optical amplification ပြုလုပ်ရာမှ electromagnetic radiation ကြောင့် ရရှိလာတဲ့ အနီရောင် အလင်းတန်းဖြစ်ပြီး၊ precise lines ရဲ့ light source ဖြစ်ပါတယ်။ 'laser ရောင်ခြည်' light beam ဟာ၊ လေထု သို့မဟုတ် ရေအတွင်းမှ၊ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ၊ straight line အနေနဲ့ ဖြောင့်တန်းစွာ ဖြတ်သန်းသွားကာ၊ sensing object ဆိုတဲ့ reference plane နဲ့ ထိတွေ့စဉ်မှာတော့ light beam ရဲ့အပြင်ဖက်မှာ slit ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ 'rectilinear propagation' လို့ခေါါပါတယ်။ ဒေါင်လိုက် transverse နဲ့ အလျှားလိုက်အလင်းတန်း longitudinal wave တွေမှာ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ rectilinear propagation ကို sensor မှတဆင့် detect လုပ်ကာ၊ alignment ချိန်ညှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
lasers and electronic targets ဆိုတဲ့ laser instrumentation ကရိယာတွေ အသုံးပြုပြီး alignment ချိန်ညှိရာမှာ၊ precise lines ဆိုတဲ့ LOS ကို deciding အနေနဲ့ ရှင်းလင်း ထိရောက်စွာ၊ သက်ရောက်စေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြောင့်တန်းမှု straightness ချိန်ညှိရာမှာ object နဲ့ အနီးအဝေး near and far အပြင်၊ ဘယ်ညာ left or right နဲ့ အထက်အောက် up or down အနေအထား တနည်းအားဖြင့် two reference points အတွင်း LOS ထိရောက်စွာ သက်ရောက်စေခြင်းဟာ၊ အရေးကြီးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ကြီးမားတဲ့ စက်ကရိယာ heavy machine tool တွေရဲ့ alignment ချိန်ညှိရာမှာ LOS ဟာ၊ located off အနေနဲ့ အပြင်ဖက်မှာ ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စက်ကရိယာရွှေ့လျားသွားခြင်းနဲ့ ပြင်ပမှ deflect အဖြစ် LOS ကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပေါါစေခြင်းတို့ ရှိနေခဲ့လျှင်၊ အမှားအယွင်း error တွေပေါါပေါက် နိုင်ပါတယ်။
နဂိုမူလ original LOS နဲ့ အပြိုင် parallel သို့မဟုတ် perpendicular LOS ဖြစ်ပေါါလာစေဖို့အတွက်၊ 'pentaprism' ကို အသုံးပြုပါတယ်။ pentaprism ကို optical squares လို့လည်းခေါါပါတယ်။ pentaprism ဟာ အလင်းတန်း ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ transparent optical element ဖြစ်ပြီး၊ ထောင့်ချိုး (၅) ခု ပါဝင်တဲ့ အလင်းပြန်ပဉ္စဂံ five-sided reflecting prism ပုံသဏ္ဍန်ရှိပါတယ်။ ပြန်လင်းတန်း reflected beam ကို deviate အနေနဲ့ စောင်းကာ၊ အလင်းတန်းသွေဖီခြင်း မဖြစ်ပေါါရန်၊ pentaprism အတွင်းမှ ဖြတ်သန်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
optical amplification ပြုလုပ်ရာမှ electromagnetic radiation ကြောင့် ရရှိလာတဲ့ laser ရောင်ခြည်တွေကို၊ အမျိုးအစား type အနေနဲ့ gas lasers, chemical lasers, excimer lasers, solid-state lasers, fiber lasers, photonic crystal lasers, semiconductor lasers, dye lasers, free electron lasers, bio laser နဲ့ exotic laser ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး first alignment laser systems အဖြစ်၊ (၁၉၆၁) ခုနှစ်မှာ helium-neon (HeNe) laser ဆိုတဲ့ 'gas lasers' ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ helium-neon အမျိုးအစား laser ဟာ အလင်းတန်းကို၊ "CW" လို့ခေါါတဲ့ အဆက်မပြတ် continuous wave လှိုင်းအနေနဲ့ ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
helium-neon laser ဟာ အလင်းလှိုင်းတည်ငြိမ်မှု 'coherence' ဂုဏ်သတ္တိမြင့်မားခြင်းနဲ့ အလင်းလှိုင်း သိပ်သည်းမှု 'gaussian irradiance' ဂုဏ်သတ္တိမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် collimated light အနေနဲ့ ဖြောင့်တန်းကျယ်ပြန့်စွာ၊ long distance အကွာအဝေး အထိ၊ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချင်း 1 mm diameter ရှိတဲ့ HeNe laser အလင်လှိုင်းဟာ၊ သင့်လျှော်တဲ့ reasonable range အကွာအဝေးအတွင်း၊ အချင်6း~ 12 mm diameter အထိ၊ ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
laser alignment ချိန်ညှိရာမှာ၊ 'quadcell' လို့ခေါါတဲ့ 2D (two dimensional) position sensitive targets တွေကို၊ (၁၉၇၀) ခုနှစ်မှာ electronic targets အဖြစ်စတင် အသုံးပြုခဲ့ ပါတယ်။ စတုရန်းပုံသဏ္ဍန် square photo-detectors (၄) ခုကို (၂) ခုစီ၊ အုပ်စုတစု ခွဲကာ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် 'quadcell' လို့ခေါါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 'quadcell' ကို အသုံးပြုပြီး၊ ချိန်ညှိခြင်းကို 'nulling method' လို့လည်းခေါါပါတယ်။ target ရဲ့ surface မျက်နှာပြင်ပေါါ၊ အလင်းတန်းကျရောက်ရာမှတဆင့် analog signal processing ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ အလင်းတန်းဟာ photo-detectors (၂) ခုရဲ့ boundary ကြားမှာ exactly straddled အနေနဲ့ တိကျစွာကျရောက်ရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။ photocells လို့ခေါါတဲ့ photoelectric detectors/ sensors တွေမှာ အလင်းတန်း light beam ထုတ်ပေးမယ့် emitter နဲ့ light beam ကိုလက်ခံမယ့် receiver တို့ပါဝင်ပါတယ်။ photocells (၂) ခု ကို တခုနဲ့တခု ဆန့်ကျင်ဖက် opposite အနေအထားမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ photocells တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ electrical output မှတဆင့် ဖတ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Reference & image credit to : D C Williams, Optical Methods of Engineering Metrology (ISBN 0-412-39640-8) 477 pp Charles S Williams, Orville A. Becklund (1989)., J. D. Trolinger, Optical Inspection and Testing (ISBN 00-8194-1039-X) 284 pp/ 11 papers., Handbook of Optics, Discol, W., Ed., McGraw Hill, 1978., Lionel R Baker, Specification and Measurement of Optical Systems (ISBN 0-8194-0960-X) 250 pp/ 36 papers., Introduction to the Optical Transfer Function, Wiley-Interscience (ISBN: 0-471-94770-9) Yoder (1986) Opto-Mechanical System Design, New York, Dekker., Tatarskii, V. I., “The Effects of the Turbulent Atmosphere on Wave Propagation”, Moscow, 1959., Smith, F. “The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook” Vol. 2, Atmospheric Propagation of Radiation, SPIE Press, 1993., Photoelectric sensor (၁), မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်။ (၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂။) , Photoelectric sensor (၁) (Wednesday, 14 December 2011.)
Posted by ကိုထွန်း at 04:35 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 04:44 No comments:
ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။ (၂၀၀၉) ခုနှစ်ခန့်တုန်းက ထင်ပါတယ်။ မနက်တိုင်း ပြား (၇၀) တန် သတင်းစာလေး၊ ဘတ်စ်ကားပေါါမှာ ဖတ်နေရင်း၊ မန်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ MIT Technical Review စာစောင်မှ၊ ဆောင်းပါးတပုဒ်လးတပုဒ်ကို၊ ဖတ်မိပါတယ်။ စာစောင် ကတော့ ဝယ်ဖတ်တာမဟုတ်ပဲ၊ ပြား (၇၀) တန် သတင်းစာဝယ်ရင်း၊ အိမ်နားမှ သတင်းစာဟောင်း၊ ပစ္စည်းဟောင်းတွေဝယ်သူ 'ကာရန်ဂူနီကြီး' ဆီက၊ အလကားတောင်းလာတာပါ။
ဆောင်းပါးရဲ့နာမည်က ရေနွေးငွေ့သုံး အင်ဂျင်တွေ ပြန်လာတော့မှာလား " Return of the Steam Engine ? " ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ကတော့ MIT Technical Review စာစောင်ရဲ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ Kevin Bullis ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အာဘော်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ၊ တွေးမြင်မိတာလေးကို ဟိုမရောက်ဒီမရောက်၊ ရေးသားဖော်ပြပါဦးမယ်။
မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှု exhaust emissions မှတဆင့်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution ကိုလျှော့ချရာမှာ၊ အတွင်းမီးလောင်အင်ဂျင်လို့ခေါါတဲ့ internal combustion engines တွေဖြစ်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး gasoline engines တွေအစား၊ အပြင်မီးလောင်အင်ဂျင် external combustion engines ဖြစ်တဲ့၊ ရေနွေးငွေ့သုံး steam engines တွေ ဒါမှမဟုတ် lithium batteries တွေကို၊ alternative အနေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုခြင်း ရှုဒေါင့်မှ၊ စဉ်းစားတွေးတောမိပါတယ်။ lithium batteries တွေကို၊ alternative အနေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုရာမှာ၊ ကုန်ကြမ်းရရှိမှုမှာ အကန့်အသတ် အခက်အခဲတွေ၊ ရှိနေတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း 'lithium' ကလည်း၊ 'rare earth' မှတဆင့် တူးဖော်သန့်စင် ပြီးမှ၊ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
internal combustion engines တွေကို (၂၀) ရာစု၊ တစုလုံး ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး transportation ဆိုတဲ့ 'သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ' မှာ၊ တွင်တွယ်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ internal combustion engines တွေကြောင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution ကိုလျှော့ချရာမှာ၊ လောင်စာ အဖြစ် biomass ကို အသုံးပြုထားတဲ့ steam engines တွေနဲ့၊ အစားထိုးအသုံးပြုရန် စမ်းသတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ biomass မှတဆင့် thermal conversion နည်းပညာကိုသုံးပြီး၊ မြင်းကောင်ရည် (၁၀၀) ပမာဏ စွမ်းရည်ရှိတဲ့၊ steam engine ကို၊ (၁၉၉၉) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ Mark V engine အဖြစ်၊ ထီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ ဈေးကွက်အတွင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာ commercial အနေနဲ့ စီးပွားဖြစ်၊ အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခြင်း မရှိသေးသလို၊ economically အနေနဲ့လည်း တွက်ခြေကိုက်ကာ၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
'biological material' လို့ခေါါတဲ့ 'biomass' ဆိုတာကတော့ ဇီဝသက်ရှိ living organisms တွေဖြစ်ပြီး၊ အပင် plant သို့မဟုတ် အပင်တွေမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ plant-derived materials ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ biomass မှတဆင့် biofuel ဆိုတဲ့ ဇီဝလောင်စာဆီကို၊ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ biomas မှတဆင့် 'စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း' ကို thermal conversion, chemical conversion နဲ့ biochemical conversion ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ဆီနဲ့ ဓါတ်ဆီတို့လို ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ 'fossil fuels' တွေမှ တဆင့် ထုတ်ယူရရှိတဲ့ ကူးပြောင်းစွမ်းအင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်တဲ့အခါ၊ 'biomass - derived energy' ဆိုတဲ့ biomass မှ တဆင့် ထုတ်ယူရရှိတဲ့ ကူးပြောင်းစွမ်းအင်တွေဟာ၊ carbon dioxide emissions ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ပိုမိုလျှော့နည်းတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. cogeneration station in Metz, France - 45MW boiler uses waste wood biomass as energy source.
biomass - derived energy နည်းပညာဟာ၊ 'thermal conversion' အနေနဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်စက်ရုံ energy plant ကဏ္ဍ၊ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု electricity production source အဖြစ်၊ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် တိုးတက်နေပါတယ်။ United States ဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ (၁၁ %) ဟာ biomass - derived energy plant တွေမှ၊ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ ကောက်ယူရရှိတဲ့ စာရင်းတွေအရ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာ biomass - derived energy plant စက်ရုံအရည်အတွက် (၈၅) ရုံရှိတာ သိရပါတယ်။ ဥရောပမှာလည်း biomass - derived energy plant စက်ရုံတွေကို 'cogeneration station' အနေနဲ့ electricity production source အဖြစ်၊ တည်ဆောက်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
'chemical conversion' အနေနဲ့ ethylene နဲ့ propylene တို့လို၊ 'olefins' တွေထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ methanol ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာလည်း၊ biomass ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အလားတူ gas to liquids လို့ခေါါတဲ့ အငွေ့မှ အရည်သို့ပြောင်းလဲတဲ့ 'fischer – tropsch process' နည်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး၊ synthetic lubrication oil တွေနဲ့ synthetic fuel တွေကို၊ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျောက်မီးသွေး coal နဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ natural gas တို့ကို၊ အသုံးပြုသလို biomass ကိုလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ biomass ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ 'fischer – tropsch process' နည်းစဉ်မှတဆင့် petroleum - derived hydrocarbons အခြေခံ synthetic fuel ဖြစ်တဲ့၊ low-sulfur diesel fuel ကိုရရှိပါတယ်။
(700 °C) အထက် မြင့်မားတဲ့အပူရှိန်အသုံးပြုပြီး organic သို့မဟုတ် fossil based carbonaceous materials တွေကို၊ carbon monoxide, hydrogen နဲ့ carbon dioxide ဓါတ်ငွေ့တို့ အဖြစ်၊ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကို 'gasification' လို့ခေါါပြီး၊ ရရှိလာတဲ့ ဓါတ်ငွေ့ရော gas mixture ကို 'syngas' သို့မဟုတ် 'synthesis gas' တနည်းအားဖြင့် 'synthetic gas' လို့ခေါါပါတယ်။ biomass မှထုတ်ယူ ရရှိလာတဲ့ 'syngas' ကို 'producer gas' လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ biomass gasification ကို၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေဖိအား atmospheric pressure မှာသာ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်၊ incomplete combustion အနေနဲ့ carbon monoxide, hydrogen နဲ့ methane အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့ combustible gas တွေရရှိလာပြီး၊ producer gas အနေနဲ့ internal combustion engines တွေမှာ၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
living organisms တွေဖြစ်တဲ့ 'biological material' တနည်းအားဖြင့် 'biomass' ကို၊ 'gasification' အနေနဲ့ပြောင်းလဲရာမှာ၊ ကျောက်မီးသွေး coal နဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ natural gas တို့လို၊ fossil based carbonaceous materials တွေနဲ့ မတူပဲ၊ ကုန်ကျစားရိတ်မြင့်မားမှု ရှိသလို၊ နည်းပညာပိုင်းအရ သတိပြုရမယ့် technical risk တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် biomass မှထုတ်ယူရရှိတဲ့ gas mixture ကို၊ လှောင်အိုး pressure vessel တွေအတွင်းထည့်သွင်းရာမှာ၊ fossil based carbonaceous materials တွေ မှထုတ်ယူရရှိတဲ့ gas mixture တွေထက်၊ ပိုမို ခက်ခဲတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. microbial electrolysis cell
natural material ဖြစ်တဲ့ biomass ကို၊ bacteria တွေမှထုတ်ပေးတဲ့ enzymes တွေနဲ့ အခြားသော အဏုဇီဝ micro-organisms တွေ အသုံးပြုပြီး၊ 'biochemical conversion' အနေနဲ့ 'microbial electrolysis cell' ဘထ္တရီတွေကို တည်ဆောက်ကာ၊ hydrogen ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ biocatalysts လို့ခေါါတဲ့ bacteria တွေမှထုတ်ပေးတဲ့ enzymes တွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ အဟောင်း waste vegetable oils တွေမှတဆင့် 'transesterification' နည်းစဉ် အသုံးပြုပြီး၊ 'biodiesel' လောင်စာဆီကို၊ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Refrence : MIT Technology Review, Return of the Steam Engine ? by Kevin Bullis, December 15, 2009., http://www.biomassenergycentre.org.uk/ Retrieved on 2012-02-28.
Posted by ကိုထွန်း at 02:30 No comments:
ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေဟာ၊ အတွင်းမီးလောင်အင်ဂျင်လို့ခေါါတဲ့ internal combustion engines တွေထဲမှာ most efficient power plant အနေနဲ့ စွမ်းအင်တွေကို၊ ထိထိရောက်ရောက် ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ heavy trucks လို့ခေါါတဲ့ အကြီးစားကုန်တင်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ကြီးတွေ၊ urban buses လို့ခေါါတဲ့ မြို့တွင်းခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေနဲ့ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံး industrial equipments စက်ပစ္စည်းတွေမှာ diesel engines တွေကို၊ အမြောက်အများ exclusively အနေနဲ့ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် passenger cars လို့ခေါါတဲ့ လူစီးမော်တော်ယာဉ်တွေမှာ၊ diesel engine တတ်ဆင် အသုံးပြုမှု၊ တွင်ကျယ်လာတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။
foreseeable future အနေနဲ့ အနာဂတ်ကို၊ မျှော်တွေးကြည့်တဲ့အခါ၊ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး world’s transportation ကဏ္ဍဟာ၊ diesel engines တွေရဲ့ 'ပြိုင်ဖက်' counterpart ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး gasoline engines တွေအပေါါ၊ ဆက်လက် မှီခိုနေရဦးမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး gasoline engines တွေဟာ၊ lower emissions လို့ခေါါတဲ့ 'သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို၊ ထိခိုက်မှုမရှိပဲ မီးရှို့လောင်စာ စွန့်ထုတ်မှု' နဲ့ increased energy efficiency လို့ခေါါတဲ့ 'စွမ်းအင်တွေကို ထိရောက်စွာ၊ အမြင့်မားဆုံး အသုံးပြုနိုင်မှု' ဆိုပြီး၊ နည်းပညာ technology ကဏ္ဍမှ၊ ဖြေရှင်းရမယ့် challenges တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး gasoline engines တွေဟာ၊ အတွင်းမီးလောင်အင်ဂျင်လို့ခေါါတဲ့ internal combustion engines တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ မီးရှို့လောင်စာ စွန့်ထုတ်မှု exhaust emissions မှတဆင့်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution ကို၊ အနည်းနဲ့အများ significant contributors အနေနဲ့ ပေါါပေါက်စေ ပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution ဟာ၊ human health ဆိုတဲ့ လူသားတွေရဲ့ ကျမ်းမာရေးကိုသာမက၊ environment ဆိုတဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ကိုလည်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။
Fig. EU emissions limits for spark-ignition engines/ gasoline engines
Fig. EU emissions limits for diesel engined passenger and light commercial vehicles
ဒေသအချို့မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution အားလျှော့ချနိုင်စေရန်၊ 'နိုက်ထြိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှုအနည်းဆုံး' NOx near-zero emissions နဲ့ PM လို့ခေါါတဲ့ particulate matter တနည်းအားဖြင့် 'မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှုမှာပါဝင်နေတဲ့ မသန့်ရှင်းသော အမှုန်အမွှားစွန့်ထုတ်မှု အနည်းဆုံး' အဆင့်သတ်မှတ်ချက် standards တွေ ပြဌာန်း လာတဲ့အတွက်၊ နည်းပညာအရ clean diesel technologies ကိုအသုံးပြုပြီး၊ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေကိုပြောင်းလဲတည်ဆောက် ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။ မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် emission standards အရ၊ မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပနဲ့ ဂျပန်တို့မှာ new clean diesel engines လို့ခေါါတဲ့ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်ပေါါစေမယ့် diesel engines တွေနဲ့ gasoline engines တွေကိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြသလို၊ လက်ရှိအသုံးအသုံးပြုနေဆဲ diesel engines တွေကိုလည်း၊ emission standards နဲ့ ကိုက်ညီစေရန် retrofitted အနေနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ကာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ mono-nitrogen oxide တနည်းအားဖြင့် nitric oxide (NO) နဲ့ nitrogen dioxide (NO2) အစရှိတဲ့ NOx တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ လျှော့ချနိုင်ဖို့ 'Emission standards' တွေကို၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားပါတယ်။ nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, particulate matter (PM) လို့ခေါါတဲ့ soot နဲ့ carbon monoxide (CO) သို့မဟုတ် volatile hydrocarbons တွေကြောင့် air pollution ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဆိုတဲ့ greenhouse effect ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ nitrous oxide (N2O) နဲ့ လေထု ညစ်ညမ်းမှုဆိုတဲ့ air pollution ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ (NOx) တို့ကို၊ ရောထွေးမှတ်သားတတ်ပါတယ်။ NOx ထွက်ပေါါလာမယ့် primary sources တွေကို thermal NOx, fuel NOx နဲ့ prompt NOx ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ thermal NOx ဟာ၊ high temperature oxidation ကြောင့်ဖြစ်ပေါါပြီး၊ hydrocarbon molecules တွေဟာ carboxylic acids အဖြစ်၊ converted အနေနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားခြင်းကို 'oxidation' လို့ခေါါပါတယ်။ fuel NOx ကတော့ လောင်စာတွေမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု combustion ကြောင့် ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ fuel NOx ဟာ NOx ထွက်ပေါါမယ့် အဓိက major source ဖြစ်ပါတယ်။ Prompt Nox ကတော့ လောင်စာတွေရဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအစ တနည်းအားဖြင့် combustion ရဲ့ earliest stage မှာ ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စက်ာပူမှ၊ မော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် vehicle emission standards သတ်မှတ်ပုံတွေနဲ့ သက်မှတ်ချက်တွေ၊ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပုံကိုလည်း၊ ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရစေ။ စက်ာပူ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာန Ministry of the Environment မှ PCD လို့ခေါါတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးဌာန Pollution Control Department ဟာ၊ vehicle emission standards တွေကို၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းရာမှာ၊ Light-Duty Highway Vehicles, Heavy-Duty Highway Vehicles နဲ့ Off-Road Engines ဆိုပြီး၊ မော်တော်ယာဉ်တွေကို အုပ်စု (၃) စု ခွဲခြားပါတယ်။
(၁) - Light-Duty Highway Vehicles တွေမှာ အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ စကူတာဆိုင်ကယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ (၁၉၉၁) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ စကူတာဆိုင်ကယ်တွေ အားလုံးကို၊ US 40 CFR 86.410-80 Emission Standard နဲ့ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၄) ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး petrol-driven vehicles အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေအားလုံးကို၊ European Directive 91/441/EEC (CED) သို့မဟုတ် Article 31 of the Japanese Safety Regulations for Road Vehicles နဲ့ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး petrol-driven vehicles အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေအားလုံးရဲ့ မီးရှို့လောင်စာစွန့်ထုတ်မှု exhaust emissions system မှာ၊ catalytic converters တွေကို ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
အလားတူ (၁၉၉၈) ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel driven vehicles အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေ အားလုံးကို၊ European Directive 93/ 59/ EEC နဲ့ ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ MLW လို့ခေါါတဲ့ maximum laden weight လို့ခေါါတဲ့ ယာဉ်နဲ့ကုန် စုစုပေါင်း 3,500 kg နဲ့ အောက်၊ အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel driven vehicles တွေကို၊ အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေအဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့၊ (၂၀၀၁) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ maximum laden weight လို့ခေါါတဲ့ ယာဉ်နဲ့ကုန် စုစုပေါင်း 3,500 kg နဲ့ အောက် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel driven vehicles တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး petrol-driven vehicles အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေ အားလုံးကို၊ European Directive 96/ 69/ EC for light duty vehicles (Euro II) နဲ့ ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါတော့တယ်။
(၂) - Heavy-Duty Highway Vehicles တွေမှာ၊ maximum laden weight လို့ခေါါတဲ့ ယာဉ်နဲ့ကုန် စုစုပေါင်း 3,500 kg နဲ့ အထက် အလေးချိန်ရှိတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေ၊ ပါဝင် ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ (၁၉၉၈) ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel driven vehicles မော်တော်ယာဉ်တွေကို European Directive 91/ 542/ EEC Stage I နဲ့ ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့၊ (၂၀၀၁) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး၊ ယာဉ်နဲ့ကုန် စုစုပေါင်း 3,500 kg နဲ့ အထက် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel driven vehicles တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီလောင်စာသုံး petrol-driven vehicles အပေါ့စား မော်တော်ယာဉ်တွေ အားလုံးကို European Directive 91/ 542/ EEC Stage II နဲ့ ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု ပါတော့တယ်။
(၃) - Off-Road Engines ဆိုတာကတော့ public roads ဆိုတဲ့ အများသုံးလမ်းပေါါမောင်းနှင်မယ့် ယာဉ်တွေမှာ၊ တတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပဲ၊ စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် စက်ယန္တယား equipment or machinery အနေနဲ့ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး diesel engines တွေကို၊ main or auxiliary prime mover အဖြစ်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားသော engines တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ဆီလောင်စာသုံး သဘေ်ာမှ ship engines တွေ၊ မီးရထားစက်ခေါင်း railway locomotive engines တွေ၊ လေယာဉ်ပျံ aircraft engines တွေနဲ့ Land Transport Authority ဆိုတဲ့ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့မှာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ diesel engines တွေကို၊ off-road engines အဖြစ် ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ (၂၀၀၀) ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး off-road engines တွေကို မတင်သွင်းခင် (၁) လကြိုတင်ကာ၊ PCD လို့ခေါါတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာ ဖြစ်သလို၊ Japan သို့မဟုတ် US Tier 1 သို့မဟုတ် EU Stage I off-road diesel exhaust emission standards နဲ့ ကိုက်ညီမှသာ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါတော့တယ်။
Reference and image credit to : http://www.dieselnet.com/, http://cfr.vlex.com/, http://eur-lex.europa.eu/, http://www.un.org/, http://repairpal.com/, http://www2.dmu.dk/, http://transportpolicy.net/, http://eur-lex.europa.eu/, http://cms.nea.gov.sg/, http://www.huzarpower.com/, http://delphi.com/,
Posted by ကိုထွန်း at 01:48 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 03:04 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 04:33 No comments: